liQela labaBhinqele phezulu kwiiLwimi ngeeLwimi (i-MAG)
(10 Febhruwari 2003)
Ipalamente yelizwe mayingahlehli kwezeelwimi
Thina bamagama abo alapha ngezantsi sikhathazwe kakhulu sisindululo seKomiti yeMigaqo yePalamente sokuba makwamkelwe isiNgesi sibe lulwimi ekukuphela kwalo ekubhalwa nekushicilelwa ngalo ePalamente, nasisigqibo sikaSomlomo wePalamente sokuba oku kuphandwe ngokungakumbi.
Inyathelo elinjalo lingangquzulana ngqo nomyalezo woMgaqo-siseko nowomthetho wezeelwimi osandula kupapashwa liSebe lezoBuchule neNkcubeko wamkelwa yiKhabhinethi. Oku kungathetha ukubuya umva (ukuhlehla) kumthetho weelwimi ngeli xesha kufuneka kakhulu inkqubela-phambili ekusetyenzisweni kweelwimi ngeelwimi. IPalamente inoxanduva olulodwa malunga nalo mcimbi, iyisimboli kwaye ikwanokuba sisixhobo sayo yonke into yedemokhrasi yelizwe lethu - kuquka ukusetyenziswa kweelwimi ngeelwimi - esekwe kuzo.
Isindululo seKomiti yeMigaqo nokuzimisela kwamanye amalungu epalamente ukusisabela esi sindululo kubonakalisa impakamo yokungazicingeli iziphumo zesi sindululo kuluntu ngokumalunga nolwimi ngokubanzi. Asiyisi so konke into yokuba ulwimi lungasetyenziswa ukucutha okanye ukwandisa ukufikelela, ukuthabatha inxaxheba namathuba kuninzi lwabantu boMzantsi Afrika abangenazinto nabachwethelwe phaya, abangasaziyo isiNgesi. Oku kuthetha ukuba uninzi lwabantu baseMzantsi Afrika abanamdla okanye abanasabelo nalungelo lokuphanda iingxoxo zePalamente yeLizwe ezibhaliweyo nezicholacholwe ngeeteyiphu.
Intetho ethi umthetho ololu hlobo uza kuba yinto nje yexeshana ayimele kuhoywa kakhulu. Kuluntu oluqhubela phambili ngalo lonke ixesha into yexeshana mayisondele ingabikude kakhulu kuleyo imele kwenzeka. Malunga nemithetho yeelwimi eMzantsi Afrika oku kuthetha ukuba naluphi na utshintsho lomthetho olwenziwayo kwindawo yoluntu malusoloko lulolongezayo kunokucutha kusetyenziso lweelwimi ezininzi.
Ukubuya umva phantsi kwegwiba leendleko yimpazamo enkulu. Kwilizwe elineelwimi ezininzi elifana nelethu ukulingana kweelwimi asinandlela yakukhetha kokuba nayo imali okanye ukungabi nayo. Yimfuno yomgaqo-siseko ebethelela ilungelo loluntu elisisiseko kwaye - njengePalamente okwayo - eliyintsika engundoqo kwidemokhrasi, esingenakuyingxenga ibe ndyengelele okanye siyidelele. Indlela yokuxoxa enikezela ngamalungelo nedemokhrasi phantsi kwesebe leendleko ayinandawo kumaziko ethu oluntu kwaye mayichithwe ngoko nangoko ingaze iphinde ivuke. Ngenene xa kuqwalaselwa ukuba iindleko zokusetyenziswa kweelwimi ngeelwimi asiyonto yemali nje kuphela kuba naxa kujongwa iindleko ngokwemali ziphantsi kakhulu kunokuba abanye abantu beqonda. Sikholelwa ukuba isizathu seendleko masingasetyenziswa njengento yokubuyela umva kakhulu.
Ngako oko sibongoza iKomiti yeMigaqo, uSomlomo nePalamente ngokubanzi ukuba basikhabe esi sindululo ngawo onke amagunya abanawo. Sindulula ukuba iingxoxo zepalamente zicholacholwe ubuncinane ngeelwimi ezimbini, kodwa sikhetha ukuba ibe zizo zonke iilwimi zaseburhulumenteni, olunye kwezi ibe lolo iingxoxo beziqhuba ngalo. Ukufumana isikhokelo seelwimi zokubhala nokushicilela makulandelwe isikhokelo seBhodi yeeLwimi zaseMzatsi Afrika i-Pan South African Language Board. Apha ke iPalamente imele ibe ngumzekelo kuwo onke amaziko oluntu eMzantsi Afrika.
Kananjaqo sifuna ukubongoza amalungu epalamente ukuba abe ngathi ayaqinisa ekuzisebenziseni zonke iilwimi zethu zaseburhulumenteni xa ethetha epalamente. Ukuba iinkokeli zethu zelizwe zineentloni ngeelwimi zazo ziza kubakhokela kanjani abantu ekuphumeni ekukhotyozweni kweengqondo zabo ngamakholoniyali? Ukukwenza oku kukhawuleze, ubukho beetoliki zazo zonke iilwimi ngalo lonke ixesha makubuyiselwe kwakhona ePalamente.
Ukongeza, izaziso zikawonke-wonke ezingesiNgesi kuphela epalamente nakufuphi nayo zimele ukuba, ngokungxamisekileyo, zisuswe endaweni yazo kufakwe ezingeelwimi ngeelwimi eziseburhulumenteni. Ipalamente asiyoyegcuntswana labantu abakhethiweyo abazi isiNgesi, koko yeyabo bonke abantu boMzantsi Afrika.
ILIZWE ELIILWIMI NGEELWIMI ELINORHULUMENTE OTHETHA ULWIMI OLUNYE ALINAKUBIZWA NJENGEDEMOKHRASI!
(Ingxelo eyamkelwe nguwonke-wonke kwintlanganiso kawonke-wonke yeQela eliBhinqele phezulu kwiiLwimi ngeeLwimi (i-MAG) ebingomhla we-10 Febhruwari 2003)
1. Neville Alexander
(Project for Alternative Education in Southern Africa, member of Western Cape Language Committee)
2. Piet Badenhorst
3. Carole Bloch
4. Gerrit Brand
5. Pedro Dausab
(National Khoisan Council)
6. Amanda de Stadler
7. Tsedi Dipholo
8. Koos du Toit
9. Charlyn Dyers
10. Sandile Gxilishe
11. Liesel Hibbert
12. Annette Humphries- Heyns
(Deaf Federation of the Western Cape / Sign Language Project)
13. Mhlobo Jadezweni
14. Fayrooz Johnson
15. Victor Khambule
16. Monica Kirsten
17. Ernest Kleinschmidt
(Institute for the Deaf)
18. Wilna Liebenberg
(South African Translators Institute)
19. Sandisiwe Mangcu
20. Dominique Mwepu
21. Abner Nyamende
(Department of African Languages, University of Cape Town)
22. Koos Oosthuysen
23. Ncebakazi Saliwa
24. Sizwe Satyo
25. Werner Scholtz
(Freelance language practitioner)
26. Latifa Shabodien
27. Quintus van der Merwe
28. Andre van der Walt
29. Alet van Huyssteen